Kutheni iiTattoo zisisono Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kutheni iiTattoo zisisono. Abantu abaninzi bayazibuza ukuba ukufumana iiTattoo sisono na. Nangona kunjalo, ukufumana i-tattoo okanye ukungayifumani isigqibo esimele senziwe ngawo onke amakholwa ngokwezazela zawo, kwaye ngaphezu kwako konke, ukucela ubulumko kuThixo.
Kukho ireferensi yebhayibhile enxulumene neeTattoos. Singayifumana kwi ILevitikus 19:28 «Musa ukusika umzimba wakho ngenxa yomntu ofileyo okanye wenze iitattoo. NdinguNdikhoyo«. Ukuba siyaqaphela ukuba le ndawo yebhayibhile, isalathiso kwiiTattoo senzelwe kuphela ukunqula abafileyo okanye ukuthatha inxaxheba kumasiko obuhedeni.
Ngaphandle koku, uThixo ufuna ukuba siyikhathalele imizimba yethu. Cinga ngomvambo ngokusisigxina, ke cinga ngononophelo ngaphambi kokuba wenziwe.
1 Kutheni iiTattoo zisisono
2 Izizathu ezingalunganga zokufumana umvambo
3 Yintoni omele uyenze ukuba sele ndinayo itattoo
Ukwazi ukuba ngaba tattoo Into ofuna ukuyenza sisono, kungcono ukuba uzibuze imibuzo ethile:
1) Ngaba inokuba neziphumo ezibi ebomini bam?: Simele sikhumbule ukuba kwezinye iimeko i-tattoo ingaba Isizathu sokukhutshelwa ngaphandle okanye sokuphulukana nomsebenzi.
2) Ngaba le tattoo iyamzukisa uThixo?: Ukuba uphawu oceba ukumakisha kulusu lwakho alunanto ibhekisa kwibhayibhile, lubhekisa kwisithethe esingesosabuKrestu okanye ubhala umvambo womntu ofileyo, Ukuhlasela iLizwi likaThixo. Ke ngoko, inokuba ngumthombo wehlazo.
3) Sithini isazela sam ngayo?: Ukuba isazela sakho asikuvumeli, sukuyenza. Wena Isazela lilizwi lentliziyo yakho kwaye intliziyo yakho ikhuselwe nguMoya oyiNgcwele, ke, ukuba uthi kuwe ungayenzi, sisizathu sokuba ulibale itattoo.
Kuya kufuneka sazi ukuba izinto ezininzi ziba sisono ngenxa yenkuthazo engasemva. Ke ngoko, eyona njongo ibaluleke kakhulu.
Izizathu ezingalunganga zokufumana umvambo
Nje ukuba sazi ukuba inkuthazo yeyona nto ibalulekileyo xa kusenziwa itattoo, kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezikhoyo izizathu ezahlukileyo zokuba kutheni kungafanelekanga ukuba senze tattoo. Emva koko siza kunika ezona zibalulekileyo:
1) Ukubonisa kwabanye: Ukuba isizathu sokuba ufuna ukwenza tattoo ngu bonisa ubuhle bakho kwabanyeKuya kufuneka ukhumbule ukuba ubuhle bakho bendalo banexabiso elikhulu kuThixo. Ubuhle bakho abufanele ukuba kwizihombiso zangaphandle ezinjengeenwele okanye ubucwebe. Ewe, ukuba ngaphakathi kuwe.
2) Ukuba kwifashoni: Kuya kufuneka ukhumbule ukuba iifashoni ziza kwaye zihambe, kodwa itattoo yeyobomi. Abantu abaninzi bafumana umvambo kwaye emva kweminyaka eliqela bayazisola. Hlalutya kakuhle ukuba kutheni ufumana itattoo ukuba ifashoni, kwaye ukuba yenzelwe yona, kungcono ungayenzi.
3) Ukuvukela into okanye umntu othile: Ukuba isizathu sokuba ufumane itattoo kukuba ukucaphukisa okanye ukuhlazisa abanye abantu, kuthetha ukuba awuzenzeli wena okanye uzukisa abanye, kodwa ngenxa yomsindo, inzondo okanye ezinye iimvakalelo ezingalunganga.
Yintoni omele uyenze ukuba sele ndinayo itattoo
Okwangoku apho ufumene umvambo, kodwa uyazisola, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukucela ukuxolelwa nguThixo. Kuya kufuneka uyikhumbule loo nto UThixo uyabaxolela bonke abo baguqukayo. Ke ngoko, nangona itattoo ingekhe inyamalale, uThixo uyikhathalele kakhulu intliziyo yakho kunenyama yakho.
Kukho unyango lokususa iitattoos. Nangona kunjalo, le nkqubo ibiza kakhulu kwaye inzima. Okwesibini, Ukuba uye waziphinda, akufuneki ukhathazeke ngayo nantoni na kuba uThixo sele ekuxolele.
Siyathemba ukuba eli nqaku liluncedo kuwe. Ukuba ngoku ufuna ukwazi Uyenza njani ngokufanelekileyo inzilo kaDaniel, Wancoma ukuba ukhangele iwebhusayithi yethu Fumanisa kwi-intanethi. Apha unokufumana ulwazi oluluncedo ukuphucula ubuhlobo bakho noThixo.